WARBIXIN: Saddex Sababood Oo Ay Man United Qalad Ugu Lahayd In Ay Alexis Sanchez Ka Dooratay Riyad Mahrez Iyo Man City Oo Faa'iidadeeda Heshay. - GOOL24.NET
WARBIXIN: Saddex Sababood Oo Ay Man United Qalad Ugu Lahayd In Ay Alexis Sanchez Ka Dooratay Riyad Mahrez Iyo Man City Oo Faa’iidadeeda Heshay.
October 30, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxaha Manchester ka dhisan ee United iyo City ayaa waqtiyo mid kastaba lala xidhiidhinayay saxiixyada Alexis Sanchez iyo Riyad Mahrez oo waqtiyadaa ka tirsanaa kooxaha Arsenal iyo Leicester City sida ay u kala horeeyaan laakiin dhacdooyin muhiim ahaa iyo go’aano ay maamulada Etihad Stadium iyo Old Trafford qaateen ayaa xaalada qaabeeyay.
Manchester City waxay hore heshiis 60 milyan gini ah ula gaadhay Alexis Sanchez waxayna markaas ka leexaday Riyad Mahrez oo ay kooxo badani kula tartamaysay laakiin Man United ayaa soo gashay tartankii Sanchez wuxuuna xidiga reer Chile dalbaday mushaar waali ah kaas oo ay maamulka Man City uga baxeen xiisihii ay ku doonayeen.
Laakiin Manchester United ayaa indhaha isku qabtay waxayna go’aan ku gaadhay in Alexis Sanchez ay dhaafsato Mkhitaryan isla markaana ay todobaadkii ku shaqaalaysiiso 500,000 kun oo gini taas badalkeeda Man City waxay ku laabatay Riyad Mahrez oo ay ka soo bixisay 60 milyan gini.
Laakiin waqti kadib waxaa hadda si buuxda u muuqata sababtii ay Man United qaladka ugu lahayd in Alexis Sanchez ay lacag waali ah mushaarkiisa ku ogolaaday ee ay Riyad Mahrez ula soo saxiixan waayeen.
Haddaba waxaanu halkan ku eegaynaa saddex sababood oo muhiim ah oo ay Man United ugu qaldantay in ay Riyad Mahrez ka joogsaday oo ay Sanchez la soo wareegtay waana qodobo dhinaca kale faa’iido u ah Manchester City.
3-Waxa Uu Mahrez Xalin Lahaa Dhibaatada Garabka Midig Ee Man United
Inta badan Jose Mourinho ayaa garabka midig ee weerarka kooxdiisa Man United waxa uu ku buuxiyaa Juan Mata, Jesse Lingard iyo Marcus Rashford laakiin ma aha xidigo sidii uu doonayay shaqadan uga soo baxa maadaama oo ayna ahayn xidigo caadiyan garabka weerarka ku soo barbaaray.
Mata waxa uu u badan yahay xidig khadka dhexe gala halka Rashford uu bandhigiisa ugu fiican ku sameeyo weerarka dhexe iyada oo Lingard aanu raaxo badan ku dareemin in uu garabka midig ka ciyaaro laakiin haddii ay Man United la soo saxiixan lahayd Mahrez waxa uu si buuxda u xalin lahaa garabka weerarka ee Man United.
Rihad Mahrez ayaa awooday in uu shaxda Guardiola ka saaray Leroy Sane oo xili ciyaareedkii hore ku soo guulaystay da’yarkii Premier League ugu fiicnaa isla markaana wacdaro soo dhigay wuxuuna hadda Mahrez muujiyay sababta ay Man City ugu saxsanayd ka bixitaankii Sanchez iyo heshiiskii ay Mahrez kula soo wareegtay.
Bogga 2-aad iyo 3-aad xogta ka sii akhriso.